Opioids: Ny ANTSIKA dia manana ny toetra amam-panahy Olana ao amin'ny faritra afovoany - kilasy izao TONTOLO izao
Opioids: Ny ANTSIKA dia manana ny toetra amam-panahy Olana ao amin’ny faritra afovoany — kilasy izao TONTOLO izao
Satria ny dia-taona any ETAZONIA, manambara mafy fanaintainana-voalaza. Ny fomba fanao izay mitaky valifaty izao: ny Amerikana Maro no nitsofoka mangingina ny alalan ny Opioid-misy mpanelanelana amin’ny Rongony. Ny isan’ny mpifoka mitombo, dia efa mihoatra noho ny antsasaky ny Tapitrisa Amerikana ny mpifoka rongony. Momba ny maty ny Overdoses. Tsy toy ny taloha amin’izao fotoana izao, indrindra ny fotsy hoditra avy any ambanivohitra avy amin’ny saranga antonony, ny hampiasa ny zava-mahadomelina.
Ny fahasalamana fahefana CDC (Foibe ho an’ny Maso sy fisorohana ny Aretina) milaza fa ny roa tapitrisa dolara Amerikana no Opioid-misy fanafody. Ny levitra ny painkillers efa hatramin’ny avo telo heny.
Ny olona maty ny Overdoses — efatra heny toy ny maro ahoana. Mandritra izany fotoana izany, manam-pahaizana manokana, sy ny manam-pahefana jereo ny fahasalamana fa ny vondrona zava-mahadomelina ireo mpiserasera ao amin’ny firenena.»Izany dia sarotra ny areti-mifindra amin’ny tsy nisy tsotra ny vahaolana», hoy i kaleba Alexander, Tale Mpiara-mitantana ny Johns Hopkins Foibe ho an’ny fiarovana zava-mahadomelina. Satria ny Fifandraisana eo amin’ny fanaintainana reliever fampiasana sy ny Herôinina dia akaiky. Inona no tsy mahagaga izany, satria samy zavatra simika tena toy izany koa narafitra opioids, izay miasa ao amin’ny atidoha ny mpandray ihany. A fianarana avy ao amin’ny Oniversiten’i Washington mamaritra ny fiovan’endriky ny toetra amam-panahy ny fanararaotana: ny dia-taona, izany no tena lehilahy tanora ny hoditra rehetra, ny loko, ny famohana, eo ho eo, taona ny toetra amam-panahy amin’ny maha-teny anivon’ny Opioid. Amin’izao fotoana izao, na izany aza, misy faritra, indrindra fa fotsy ny lehilahy sy ny vehivavy tao am-piandohan’ny faha-roapolo taonany ary avy tsy an-tanàn-dehibe, manoratra ny Neuro-pharmacologist Theodore Cicero. Ary: ny Telo ampahefatry ny azy efa tonga Fiankinan-doha tamin’ny levitra-afa-tsy zava-mahadomelina, toy ny oxycodone na hydrocodone dia ao amin’ny Opioid. Izany mafy fanafody, ao amin’ny saika ihany taorian’ny asa na homamiadana no itantanana, no voalaza ao amin’ny free haingana kokoa. Ny sasany, mandritra izany, dia maneho ny fanadihadiana atolotry efa tsy nanome porofo fa ny mety ny fiankinan-doha dia tsy dia lehibe. Ihany rehefa afaka bebe kokoa ny fianakaviana sy ny namana ny Marary nampiasa ny fanaintainana pills sy ny mponina ao ETAZONIA ny isan-jaton’ny amidy eran-tany Opioid levona ao amin’ny mpanelanelana, dia ny manaiky ny fiankinan-doha olana. Rehefa afaka izany, ny fahazoana fanafody sarotra kokoa, ary ny vidin-javatra rose. Ihany koa, ny fomba fanamboarana ireo niova, ka ny takelaka dia tsy fandravàna amin’ny syringe voasarika ireo — ny fomba fanao izay mampitombo ny vokatry ny akora. Na izany aza, ny vidiny tsy maintsy hitsangana, satria lasa bebe kokoa Miankina amin’ny Herôinina mitaky, noho izany, indrindra fa ny avy any Meksika, maro ny fotoana dia mora kokoa ny hametraka ny tsena. Amin’ny ampahany, ny»voatifitra»ho latsaky ny iray Dolara AMERIKANA. Tamin’ny septambra ny efa U. s. sampan-Draharahan’ny fahasalamana, ny solontenan’ny rehetra amin’ny Fanjakana any Etazonia nitondra ny manoro hevitra miaraka amin’ny tsara kokoa ny fisorohana sy ny fitsaboana ny Opioid fanararaotana sy ny Overdoses.»Ny Opioid krizy mahalala ny tsy misy sisin-tany. Mihaona ny fiainana an-tanàn-dehibe, ambanivohitra, ary suburban faritra ao amin’ny firenena iray manontolo,»hoy ny Minisitry ny fahasalamana, Sylvia Burrell tao amin’ny Fivoriana izy ary nilaza ny fihaonany tamin’ny tanora Miankina.»Izy no lehibe zazavavy, dia ny fanaintainana fanafody-miankin-doha, rehefa nananany ny fahendrena nify nalaina avy, ary avy eo dia tonga saina fa Herôinina dia mora kokoa.»Maro Opioid-Doha tsy mahazo fitsaboana. Noho izany, Obama te mba ho mora kokoa ny governemanta, ankoatra ny zavatra hafa, ny fidirana any amin’ny fitsaboana antsoina hoe naloxone, izay mamonjy aina ny raharaha Overdose raha ny vonjy taitra, fampiasana, sy ny miaraka, tapitrisa dolara AMERIKANA (eo ho eo amin’ny an-tapitrisa Euro) fanohanana. Amin’ny ankapobeny, ny teti-bola drafitra manome ho an-tapitrisa dolara ho an’ny ny fitsaboana sy ny fisorohana ny Opioid fanararaotana.»Izany no tsara mandre, nefa izany dia tsy ampy», hoy i kaleba Alexander.»Matahotra aho ho hitantsika tsy misy mandà izany areti-mifindra ny fiankinan-doha, mandra-ny fivarotana ny nirohotra ny dokam-barotra zava-mahadomelina isa dia ny fihenan’ny. Izany dia mbola lavitra ny lalana.»Miantso manam-pahaizana manokana ho hentitra ny prescribing tondrozotra, tsara kokoa ny fitsaboana sy bebe kokoa ny fanentanana ny dokotera ny fiofanana.»Ny Taranaka efa nandre ny fandalinana ny loza noho ny opioids na inona na inona. Efa ampianarina hahalala ny Fampiasana ny marokoroko sy ny mifandray loza nirohotra tsinontsinona.»Koa satria ilay izy-taona any ETAZONIA, manambara mafy fanaintainana-voalaza. Ny fomba fanao izay mitaky valifaty izao: ny Amerikana Maro no nitsofoka mangingina ny alalan ny Opioid-misy mpanelanelana amin’ny Rongony. Ny isan’ny mpifoka mitombo, dia efa mihoatra noho ny antsasaky ny Tapitrisa Amerikana ny mpifoka rongony. Momba ny maty ny Overdoses. Tsy toy ny taloha amin’izao fotoana izao, indrindra ny fotsy hoditra avy any ambanivohitra avy amin’ny saranga antonony, ny hampiasa ny zava-mahadomelina. Ny toy ny fitsipika, ny tsara sy ny areti-mifindra. Ny fahasalamana fahefana CDC (Foibe ho an’ny Maso sy fisorohana ny Aretina) milaza fa ny roa tapitrisa dolara Amerikana no Opioid-misy fanafody. Ny levitra ny painkillers efa hatramin’ny avo telo heny.
Ny olona maty ny Overdoses — in-efatra maro araka izay. Mandritra izany fotoana izany, manam-pahaizana manokana, sy ny manam-pahefana jereo ny fahasalamana fa ny vondrona zava-mahadomelina ireo mpiserasera ao amin’ny firenena.»Izany dia sarotra ny areti-mifindra amin’ny tsy nisy tsotra ny vahaolana», hoy i kaleba Alexander, Tale Mpiara-mitantana ny Johns Hopkins Foibe ho an’ny fiarovana zava-mahadomelina. Satria ny Fifandraisana eo amin’ny fanaintainana reliever fampiasana sy ny Herôinina dia akaiky. Inona no tsy mahagaga izany, satria samy zavatra simika tena toy izany koa narafitra opioids, izay miasa ao amin’ny atidoha ny mpandray ihany. Fanadihadiana iray nataon’ny the Washington University (St. Louis) dia mamaritra ny fiovan’endriky ny toetra amam-panahy ny fanararaotana: ny dia-taona, indrindra fa ny zatovolahy rehetra hoditra, loko, eo ho eo, Taona jerena ny toetra amam-panahy amin’ny maha-teny anivon’ny Opioid. Amin’izao fotoana izao, na izany aza, misy faritra, indrindra fa fotsy ny lehilahy sy ny vehivavy tao am-piandohan’ny faha-roapolo taonany ary avy tsy an-tanàn-dehibe, manoratra ny Neuro-pharmacologist Theodore Cicero. Ary: ny Telo ampahefatry ny azy efa tonga Fiankinan-doha tamin’ny levitra-afa-tsy zava-mahadomelina, toy ny oxycodone na hydrocodone dia ao amin’ny Opioid. Ireo mafy zava-mahadomelina, ao amin’ny saika ihany taorian’ny asa na homamiadana no itantanana, no voalaza ao amin’ny free haingana kokoa. Ny sasany, mandritra izany, dia maneho ny fanadihadiana atolotry efa tsy nanome porofo fa ny mety ny fiankinan-doha dia tsy dia lehibe. Ihany rehefa afaka bebe kokoa ny fianakaviana sy ny namana ny Marary nampiasa ny fanaintainana pills sy ny mponina ao ETAZONIA ny isan-jaton’ny amidy eran-tany Opioid levona ao amin’ny mpanelanelana, dia ny manaiky ny fiankinan-doha olana. Rehefa afaka izany, ny fahazoana fanafody sarotra kokoa, ary ny vidin-javatra rose. Ihany koa, ny fomba fanamboarana ireo niova, ka ny takelaka dia tsy fandravàna amin’ny fampidirana mamolavola ny ho voasarika afaka ny — fomba fanao izay mampitombo ny vokatry ny akora. Na izany aza, ny vidiny tsy maintsy hitsangana, satria lasa bebe kokoa Miankina amin’ny Herôinina mitaky, noho izany, indrindra fa ny avy any Meksika, maro ny fotoana dia mora kokoa ny hametraka ny tsena. Amin’ny ampahany, ny»voatifitra»ho latsaky ny iray Dolara AMERIKANA. Tamin’ny volana septambra, ny U. s. Department ny fahasalamana, ny solontenan’ny rehetra, Federaly sy ny Fanjakana efa niara-nitondra, manatona miaraka amin’ny tsara kokoa ny fisorohana sy ny fitsaboana ny Opioid fanararaotana sy ny Overdoses.»Ny Opioid krizy mahalala ny tsy misy sisin-tany. Mihaona ny fiainana an-tanàn-dehibe, ambanivohitra, ary suburban faritra ao amin’ny firenena iray manontolo,»hoy ny Minisitry ny fahasalamana, Sylvia Burrell tao amin’ny Fivoriana izy ary nilaza ny fihaonany tamin’ny tanora Miankina.»Izy no lehibe zazavavy, dia ny fanaintainana fanafody-miankin-doha, rehefa nananany ny fahendrena nify nalaina avy, ary avy eo dia tonga saina fa Herôinina dia mora kokoa.»Maro Opioid-Doha tsy mahazo fitsaboana. Noho izany, mba hanamora ny fitantanana Obama, ankoatra ny zavatra hafa, ny fidirana any amin’ny fitsaboana antsoina hoe naloxone, izay mamonjy aina ny raharaha Overdose raha ny vonjy taitra, fampiasana, sy ny miaraka, tapitrisa dolara AMERIKANA (eo ho eo amin’ny an-tapitrisa Euro) fanohanana. Amin’ny ankapobeny, ny teti-bola drafitra manome ho an-tapitrisa dolara ho an’ny ny fitsaboana sy ny fisorohana ny Opioid fanararaotana.»Fa tsara ny mandre, nefa izany dia tsy ampy», hoy i kaleba Alexander.»Matahotra aho ho hitantsika tsy misy mandà izany areti-mifindra ny fiankinan-doha, mandra-ny fivarotana ny nirohotra ny dokam-barotra zava-mahadomelina isa dia ny fihenan’ny. Izany dia mbola lavitra ny lalana.»Miantso manam-pahaizana manokana ho hentitra ny prescribing tondrozotra, tsara kokoa ny fitsaboana sy bebe kokoa ny fanentanana ny dokotera ny fiofanana.»Ny Taranaka efa nandre ny fandalinana ny loza noho ny opioids na inona na inona. Efa ampianarina hahalala ny Fampiasana ny marokoroko sy ny mifandray loza nirohotra tsinontsinona.»
← Online Mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana
Dia free Online Dating Site ho an'ny fanambadiana sy ny Lehibe fifandraisana →
© 2020 Lahatsary Firesahana Amin'ny Tontolo